Kolombiyaatti hidhamtoonni erga eegduu macheessanii booda baqatan - BBC News Afaan Oromoo
Kolombiyaatti hidhamtoonni erga eegduu macheessanii booda baqatan
Madda suuraa, Inpec
Manni hidhaa Kolombiyaa suuraa hidhamtootaa lamaa Sanbata baqatani gadhiiseera.
Hidhamtoonni hidhaa cimaa jala turan lama Magaalaa guddoo Kolombiyaa, Bogotaatti egdduu mana hidhaa obaasuun erga amansiisanii booda alkoolii binnee deebiina jechuun bahanii badaniiru.
Hidhamtoonni lamaanis gonkumaa kan hindeebii'iin yoo ta'u polisiin wayita ammaa kanatti isaan admsaa jirra.
Hiyiyyoonni eegdduu mana hindhaa Laa Pikotaa akka jedhanittis afurrii isaa alkoolii kan urgaa'u yoo ta'u, qoranno afuraatiif diduusaa himaniiru.
Daarektarri mana hidhaa akka jedhanitti sakkatta'insii irra deddebiin taasifamulleen omishini alakoolii manatti omishamuu mana hidhaa keessatti kan barameedha.
Jarreen lamaan bahanii badan kunnenis Jhoon Gutirez Rinokoon rebe loltuu gocha ukkaamsaa bara 2003'tiif kan waggaan 40 itti murtaa'eefi Olmedo Vaargaas kan dhiheenya garee rebe loltoota Farc irraa adda citeefi garuu hanna raawwateef murtee eegachaa tureedha.
Bulchitoonni mana hidhaas caasaa mana hidhaa kam irrattiyyuu miidhaa kan hinagarreefi haala eegduun ittiin isaan gargaare baasu irraatti hojachaa turusaanii ibseera.
Kunis taatee jecha eegduu biraa kan osoo hidhamtoonni lama egdduu tokkoo dhugaatii obaasuun erga amansiisanii booda akka alkolii biraa bitachuu deebii'an itti himu argu kan dubbate walin walitti dhufeera.
Gaaffiifi deebii afaan Ispaanshiitiin raadioo FM Kolombiyaa waliin taasifameen, daarektarri mana hidhaa kolaneel Jarmaan Ricaurtee akka jedhanitti, ''hirinni oggummaa, hirinni naamusa ogummaatiin kan qondaalli keenya tokko dambii nageenyaa cabsuun akka baqataniif mijeesseef.''
''Dadhabii qondaala kanaa jechuunis alkooliidhaan isa gowwomsuun hidhamtoonni kunneenis akka bahaniif isarratti olaantummaa argachuun baqatan jechuudha,'' jechuun ibsaniru.
Loltuun egeree Sudaan qabsiisee maaliif taphataa?
Daqiiqaa 49 dura
MM Abiy Ahimad waraana Kaaba Itoophiyaarratti ibsa akka kennan gaafataman
26 Onkololeessa 2021
Ameerikaan kaampaanii Chaayinaa biyyashiitti tajaajila bilbilaa kennu dhorkite
Ajjeechaa qondaala Magaalaa Naqamteen shakkamtoonni 'qabamaa jiru'
24 Onkololeessa 2021
22 Onkololeessa 2021
Viidiyoo, Kaabii Laameen maaliif jaallatame?, Turtii 3,11
Godina Gujiitti nageenyi dhabamuun miidhaa hongee ittisuu rakkisaa taasise
Mallattoon Pilaaneetii jalqabaa sirna gaalaaksii keenyaan ala jiru argame
Bofa kobraa akka meeshaa ittiin haadha warraa ajjeesaniitti yeroo gargaaru
Marii biyyaalessaa 'haqa-qabeessaaf' haaldureewwan afur KFOn kaa'e maal?
Fonqolchi mootummaa Sudaan Itoophiyaarratti dhiibbaa akkamii uuma?
'Ilmi mootii Sawudii, mootii duraanii 'qubeelaa summii qabu' fayyadamuun ajjesisuu hin oolle'
Intalli mootii Jaappaan kabajaa warra mootii dhiistee jaalallee isheetti heerumte
Lixa Oromiyaatti hojjettoonni kampaanii warqee butamanii turan gadhiifaman